Semalt: Amathiphu Namasu Ayisimanga Ukuvikela Ukuhlasela Kwewebhusayithi
Levi Robert Cable
Ukuhlabalala kuyingozi enkulu ukuthi izinkampani eziningi noma abantu bahlangane nosuku lwabo nosukuimisebenzi. I-hacker inolwazi lokufinyelela ulwazi lomuntu siqu ngokudala iseva yewebhu okwesikhashana engavumelekilefuthi usebenzisa iseva njengomsakazo wogaxekile. Abakhohlisi ikakhulukazi bahlose amawebhusayithi anokuphepha okuyisisekelo kuphela.
uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt ,uyazi kanjani ukuvimbela izigebengu ze-cyber kusuka ekuthungeni:
Kubalulekile ukuvuselela yonke isofthiwe yewebhu njalo ngangokunokwenzeka. Ngale ndlela,uhlelo luvikela umsebenzisi futhi luvimbela abaduni ekufinyeleleni isayithi. Ngenxa yalokho, akunakwenzeka ukuthi abahlaseli bazuze kudeukufinyelela futhi ulisebenzise ngokumelene nomnikazi. Umuntu angasebenzisa Abahlinzeki be-CMS njengoMagento oletha izibuyekezo nama-plug-ins ukuthi amawebhusayithi ngokuvamilesebenzisa. Ukuthatha izinyathelo ezinjalo kubeka umnikazi wesayithi isinyathelo esingaphambili ekuvimbeleni abaduni abanenjongo enonya yokuthola ukungena komnyango ngemuva.
Faka ama-plugin wokuphepha
Emva kokuvuselela yonke isofthiwe, qiniseka ukuthi kabili ukugqoka iwebhusayithi ngokufakaamaphuzu wezokuphepha afana neThemes angakwazi ukubona noma iyiphi indlela yokuqhaqhaza nokulungisa. Isisombululo sezokuphepha seSayithiLock singakwazi ukubona futhisusa konke okungahle kudingeke uhlelo bese ubona noma yikuphi ukudala okudalwe.
I-Hyper Text Transfer Protocol Evikelekile (i-HTTPS) yindlela yokuvikela eqinisekisaukubethela konke ukuxhumana okudluliselwe phakathi kwesiphequluli kanye newebhusayithi. Inhloso yalo ukugcina ubuqotho bemfihlo kakhuluulwazi olufana nedatha yekhadi lesikweletu namaphasiwedi..Ochwepheshe batusa ukuthi izitolo ze-intanethi zisebenzisa lesi siphakamiso kuma-portals abo. Kuyauqinisekise ukuphepha okwengeziwe, umsebenzisi kufanele asebenzise i-HTTPS ngokubambisana ne-Security Socket Layer (SSL), nokuphepha kwesendlalelo sezokuThutha.
Ukuhlaselwa kwe-SQL Injecting lapho i-hacker ingakwazi ukuthola okubaluleke kakhulu komsebenzisiulwazi usebenzisa ipharamitha ye-URL noma ifomu lewebhu. Ukuvimbela ukuhlaselwa kwe-SQL Injection, umuntu kufanele asebenzise imibuzo ephakanyisiwe. Baqinisekisa ukuthiikhodi yomthombo wewebhusayithi inemingcele eyanele yokuvimbela noma iyiphi indawo evulekile yabaduni ukubhubhisa.
Sebenzisa Inqubomgomo Yokuqukethwe Yokuqukethwe
Isikripthi sendawo (XSS) ngokuvamile sihlaselwa lapho i-hacker isebenza kabiizikripthi kwiwebhusayithi evunyelwe. Imibuzo ephakanyisiwe ngamathuluzi asetshenziselwa ukuvimbela lokhu kuhlaselwa ukuqinisekisa ukuthi akukho sikhala esisele singenamuntuukuze abaduni bangene ngemvume. Izinqubomgomo zokulondeka kokuqukethwe nazo zibalulekile ekuvimbeleni ukuhlaselwa kwe-XSS njengoba kuvumela ukungena ezizindeni ezithile.Isiphequluli kuphela ukugunyazwa futhi kuvumela ukungena emthonjeni oqondile weskripthi. I-CSP ikhomba iziphequluli ezivumelekile nalabo abangamanga.
Kubalulekile ukuba umnikazi wesayithi asebenzise o amaphasiwedi anzima abaduni abakwaziukubona kalula. Kwenzeka kuphela uma umnikazi ehlanganisa izinhlamvu ezikhethekile, izinombolo, nezincwadi zephasiwedi yakhe.
Sifila i-Admin Directories
AbaHackers Hack kungaba ukuskena izinkampani administrator kanye nokuBhaliswa ngokusebenzisa server web.Bangase bafune amagama afana 'nokufinyelela,' ngaleyo ndlela bakwandise amandla okuba hacker ukuze buthaka ukuphepha kwewebhusayithi. Ukunciphisa ithubalokhu kwenzeka, qinisekisa ukuqamba kabusha wonke amafolda omlawuli.
Kuwukuhlakanipha ukuhlala ohlangothini oluphephile ngokukhokha i-dollar ephezulu ngezinsiza zokuphepha ezingcono kakhulu.Ukuxoxwa ngenhla, yiziphakamiso eziyisikhombisa ezinhle kakhulu okufanele ziqale iwebhusayithi.